Drywall nkebi usoro
Metal stud na track
Unique ígwè ọwa
Aluminum mgbidi & n'uko usoro
Acha cement board
Nkịtị cement board
Wood ọka cement board
Akwụkwọ kụziri gypsum board
Nkịtị gypsum board
Ịkwanyere gypsum board
faiba glaasi mkpuchi
Phenolic ụfụfụ board
Rock ajị mkpuchi
Steel stud mgbidi Framing bụ akụkụ nke ndụ anyị
N'ihi na nke ezi atụmatụ, ígwè stud Framing na ọtụtụ-eji maka anyị arụ.
A oge nke idere duu maka Greek wildfire tara
site ha na 18-07-28
The kasị njọ ọku Greece enwetela na ihe karịrị afọ iri malitere na Monday, charring obibi na ụgbọala dị ka ọ na-ọku site na ala gbara osimiri okirikiri Attica region gburugburu Athens. Ọ dịkarịa ala, 74 ndị mmadụ na-enen nwụrụ anwụ si Wildfires na ọtụtụ ndị ọzọ nọgide na-efu efu. Lezienụ anya ka ọkụ mgbochi, nchekwa firs ...
site ha na 18-07-24
site ha na 18-07-19
Nso nso ọnụego mgbanwe bụ mụ, na ala kwa ụbọchị. Dị ka a dum, na-emekarị na-ebili kemgbe now.
A ọhụrụ window ga-achọta anyị
Ya mere mpako ulo oru ọhụrụ anyị website. Egosi na ụfọdụ nke ngwaahịa na Changye arụpụta na oru e wuru. Ọ bụrụ na ị na-anụtụbeghị banyere Changye n'ihu, na-amalite ebe a ị ga-ama anyị nke ọma. Dị ka azụmahịa na-etolite ibu, anyị wuru ọhụrụ a website na arịrịọ nke anyị ahịa ...